थायरयड ग्रंथि को सुनिंनु: लक्षण र उपचार
शरीर, को मानव लागि जिम्मेवार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू को एक, गतिविधि छलफल भएको endocrine प्रणाली को , विशेष मा, थाइरोइड ग्रन्थि को र। यो आकार एक isthmus द्वारा परस्पर जो दुई मुख्य भागहरु, विभाजन गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भएको हर्मोन thyroxine उत्पादन हो। यो triiodothyronine प्राप्त छ जो मा, थाइरोइड ग्रन्थि आधा, को संश्लेषण मा ठाँउ लिन्छ अर्थात्, आयोडिन उत्पन्न।
को को सुनिंनु थाइरोइड, लक्षण जनसंख्याको महिला आधा एकदम खतरनाक छ मा उत्पन्न गर्न धेरै बढी सम्भावना हुन्छ। थायरयड ग्रंथि को गतिविधि मा disturbances उपस्थिति निर्धारण गर्न, यो मानक संकेतक थाहा आवश्यक छ। त्यसैले सामान्य महिला मा 18 मिलिमिटरमा भन्दा बढी छैन, तर मानिसहरू मा - छ धेरै उच्च: 25 मिलिमिटरमा सम्म।
लक्षण: थायरयड ग्रंथि को सुनिंनु।
यो सुनिंनु भनिन्छ hypothyroidism, र यसको सार हर्मोन को एक महत्वपूर्ण कमी छ। यो रोग को उद्भव सम्बन्धित हुन सक्छ थाइरोइड वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली संग उत्पादन ब्लक कि घटक समावेश तयारी प्रयोग संग या त।
को को सुनिंनु थाइरोइड, लक्षण यो रोग को प्राथमिक वा दोस्रो फारम संकेत हुन सक्छ, यो सूचना आवश्यक छ। प्राथमिक केही pathologies उपस्थिति हुन्छ यो endocrine प्रणाली को। र माध्यमिक hypothyroidism को उपस्थिति को hypothalamus वा pituitary ग्रंथि को विकार कारण छ।
endocrine प्रणाली को क्षेत्र मा सबै भन्दा साधारण रोगहरु को एक आधिकारिक थाइरोइड ग्रन्थि सुनिंनु द्वारा पहिचान। यो लक्षण, रोगी पनि यस्तो समस्या उपस्थिति बारेमा थाह बिना लामो समय बस्नुहुन्थ्यो, एक सरल layman त अदृश्य विकास गर्छन। को विकृति को विकास को फलस्वरूप यौन जीवनमा जठरांत्रिय र हृदय प्रणाली मा अस्थिरता, साथै विचलन र मनोवैज्ञानिक disturbances अवलोकन।
सबैभन्दा विरामीहरु पनि व्यस्त तालिका वा जीवनको शहरी bustle मा सामना गर्न सक्छौं जो शरीर, कमजोरीको यसलाई बन्द लेखन, मुख्य लक्षण नोटिस छैन। सामान्यतया रोगी स्थिर कमजोरी र थकान अनुभव। यस्तो अवस्थामा काम त्यहाँ स्मृति अनुपस्थित-mindedness एक तेज गिरावट छ रूपमा, धेरै गाह्रो हुन्छ। थायरयड ग्रंथि केही सुनिंनु कपाल बढेको हानि र सुख्खा छाला मा प्रकट भएको छ।
प्रायजसो मा, endocrine प्रणाली को एक नाटकीय अवरोध त्यहाँ ह्यान्डल गर्न गाह्रो छ, जो बलियो सुनिंनु, छ, तीव्र वजन सँगसँगै छ। त्यहाँ यौन गतिविधि मा एक तेज परिवर्तन छ कि आधार मा, विशेष गरी मानिसहरू लाग्छ। तर महिला menstrual चक्र र पनि कब्जियत को अस्थिरता नोटिस। थाइरोइड सुनिंनु यी संकेत शायद एक लक्षण रूपमा देखिन्छ।
सबै को सबै भन्दा, यो विकृति आफ्नो शरीर समर्थित गर्न आवश्यक छ किनभने, पुरानो मान्छे असर गर्छ। hypothyroidism उपेक्षा र अनुपचारित बाँकी छ भने, त्यहाँ hypothyroid coma को घटना एक संभावना एक परिणाम र myocardial infarction रूपमा छ, र।
थायरयड ग्रंथि को सुनिंनु: उपचार।
अर्थात्, डाक्टर-एन्डोक्राइनोलजस्ट - यी लक्षण को खोज मा, तपाईंलाई तुरुन्त विशेषज्ञ साँघुरो ध्यान परामर्श गर्नुपर्छ। सबै को पहिलो, उहाँले थाइरोइड सिस्टम द्वारा secreted हर्मोन को sufficiency देखाउँदछ रगत, विश्लेषण। दोस्रो चरण अल्ट्रासोनिक परीक्षा अंग आकार मा असामान्यताहरु को उपस्थिति प्रकट जो बाहिर छ रूपमा।
पूरै रोग र यसको कारण निदान गर्दा छोटो समयमा पनि endocrine प्रणाली को समारोह बहाल गर्न सक्नुहुन्छ कि विशेष तयारी नियुक्त।
म घाँटी मा एक विद्रधि गठन। के गर्ने?
एक आफ्नो फिर्ता मा तंत्रिका pinched भने, के गर्ने?
किन रातो आँखा हो? कारण र उपचार।
सबै भन्दा राम्रो अपरेटिङ सिस्टम के हो?
को जिन्न कल गर्न कसरी: परम्परा र जादू
5 बाँदर र सिढी: कसरी झुण्ड अन्त
चियाको रूख आवश्यक तेल: औषधीय गुण, संरचना र अनुप्रयोगको तरिका
कसरी ग्रीक दही थप स्वादिष्ट र पौष्टिक बनाउने?
के होस्टिंग चयन गर्न? बुँदा
ट्यागानोग होटल: समीक्षा, मूल्याङ्कन, विवरण र समीक्षा
Dimitrovgrad लोकप्रिय होटल
मन्त्रालयमा जङ्गलमा एउटा मन्दिर कसरी खोज्न र यसमा त्यहाँ के छ?